Gadzirira Kugadzirira - 802Quits
Vermonters ZVikonzero zvekurega Gadzirira Kurega
Uri kushamisika nzira yakanakisa yekurega kuputa, e-midzanga kana imwe fodya? Mikana yako yekusiya iri nani zvakanyanya kana iwe uine yakagadzirirwa kurega chirongwa. Ichi chikamu chinokufambisa nenzira yekupinda munzira inoenda kune yakatarwa yekurega chirongwa uye nekubudirira kurega.
Zvimwe zvinhu zvakapusa zvaunogona kuita pamberi penguva- kunyangwe izvozvi! - kubatsira kuwedzera mikana yako yekubudirira inosanganisira:
Kubvisa zvinhu zvefodya mumba mako, zvakadai semadhishi edota, marobhoti uye mamwe mapakeji efodya kana e-fodya, kutsenga fodya, fodya kana fodya
Kuchenesa imba yako uye mota kuitira kuti hwema hwefodya husakuedze kana iwe wasiya
Uchishandisa chigamba kwevhiki rinotungamira kune rako rekusiya zuva kuti udzikise nicotine kurega (dzidza zvakawanda nezve Mahara zvigamba kubva ku802Quits)
Kukumbira rutsigiro kubva kune vaunoshanda navo, shamwari uye nhengo dzemhuri kuti vakubatsire kubudirira
Kutsvaga wekusiya shamwari anokuchengeta iwe unozvidavirira kune yako yekurega chinangwa
Wese munhu anorega fodya anozviitira chikonzero. Kune vamwe vanhu, hakusi kuda kunzwa kusaririra kana shamwari dzavo dzese dzasiya. Kune vamwe, ndezvehutano kana mhuri kana nekuda kweiyo kuwedzera kwemutengo wefodya. Chii chikonzero chako?
Nyora pasi zvikonzero zvako zvekusiya midzanga, e-fodya kana zvimwe zvigadzirwa zvefodya.
Funga nezveakawanda sezvaunogona, makuru kana madiki
Isa rondedzero padivi kwemazuva mashoma
Wobva wapfuura uye unotora zvikonzero zvishanu zvepamusoro
Chengeta runyorwa rwako newe woisa kopi pafiriji kana musuwo wepamberi. Kana shungu dzekushandisa fodya dzichirova, runyorwa rwako rwezvikonzero zvekusiya zvinobatsira kuda kwako kupfuura uye nekukuyeuchidza nezvesarudzo huru yawakaita.